အဖိုးပြောသော ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် « လက်တွဲဖော်ချစ်သူ
Feb15 by ချစ်သူအတွက်
ပုံပြောပြီဆိုရင်လည်း အဖိုးက မေးခွန်းလေးနဲ့စတတ်တယ်………
“သမီးတဲ့…အခုငါ့သမီးနဲ့အဖိုးထိုင်နေတဲ့ နေရာကနေပြီးတော့ ကောင်းကင်ပေါ်ကို
“တွေ့ပါတယ် အဖိုးရယ်” ဆိုတော့….”ဒီကြယ်လေး
တွေ ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ် ဆိုတာကိုရော ငါ့သမီး သိလား” လို့မေးတော့ မေက
လို့ ဖြေရတယ်…….အဲဒီအခါကျမှ အဖိုးက သူ့ပုံပြင်ကိုစပြောတော့တာပေါ့………။
“သမီးရယ်..ဟောဒီအဖိုးတို့နေတဲ့နေရာနဲ့ ဟိုးအဝေးကြီးကနေရာ တစ်ခုမှာ
လည်း စိမ်းမြနေတဲ့မြက်ခင်းပြင်ကျယ်ကြီးရဲ့ အလယ်မှာ ပေါက်နေပွင့်နေတဲ့ ပန်းပင်ကလေးတွေ
အဲဒီမြက်ခင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲမှာ သွားလာလုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ လူတွေ တိရိစ္ဆာန်တွေကို ကြည့်ရတာလည်း အေးအေးလူလူနဲ့တဲ့………..
မြက်ခင်းပြင်ကျယ်ကြီးရဲ့ ဒီဘက်အခြမ်းမှာတော့ အင်မတန်ကြောက်စရာ
ရသလဲဆိုတော့ ဒီရွှံ့နွံအိုင်ကြီးထဲကို ရုတ်တရက်များခြေချော်လက်ချော်ကြခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီရွှံ့နွံအိုင်ကြီးက
အောက်ခြေမှာ အသေသတ်ပစ်လိုက်တာပါပဲ ရွှံ့နွံထဲကနေရုန်းပြီးတော့ ပြန်တက်မလာနိုင်တော့ပါဘူး..
အဲဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရွံ့နွံအိုင်ကြီး ရဲ့ ဟိုဘက်တစ်ဖက်မှာကျတော့ လူမျိုးစုတစ်စု
တဲအိမ်လေးတွေထိုးပြီးနေကြသတဲ့ ဒီလူမျိုးငယ်စုလေး က သူတို့တတ်သမျှ
စပါးလေးစိုက်လိုက် အမဲလေးလိုက်လိုက်နဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတယ်တဲ့
အဲလို နေထိုင်စားသောက်နေတဲ့ တဲစုလေးဆီကို တစ်နေ့ကျတော့ သူတို့ထက်ပိုပြီး လူအင်အားများတဲ့
သူတို့ထက် ပိုပြီး လက်နက်တွေလည်းရှိတဲ့ တခြားရွာကလာပြီးတော့ သူတို့ရဲ့စပါးတွေ သူတို့ရဲ့အမဲတွေကို
“ဒီလိုတော့ မဖြစ်တော့ဘူး…ငါတို့လူမျိုးစုတွေလုံးပါးပါးလိမ့်မယ်” ဆိုပြီးအစည်းအဝေးခေါ်လိုက်တယ်..
လူကြီးတွေက “ငါတို့မှာရှိတဲ့ဆန်စပါး အမဲတွေလည်း ကုန်တော့မယ် ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတာကို
စဉ်းစားကြပါအုံး” လို့ပြောတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ပရိတ်သတ်ထဲက လူကြီးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့
” ဟေ့ကောင်..ဒန်ကို…ထွက်ခဲ့ပါအုံး” လို့ခေါ်လိုက်တယ်……..သူခေါ်တဲ့အချိန်မှာ လူရှေ့ကိုထွက်လာတဲ့
တစ်ယောက်ကတော့ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ အားကောင်းမောင်းသန် လူငယ်တစ်ယောက်
ပါပဲ….ဒီလူငယ်လေးကထွက်လာပြီးတော့ “ဟုတ်ကဲ့……ကျွန်တော်လည်း ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး
တော့ စဉ်းစားနေတာကြာပြီ……ကျွန်တော်တို့မှာ သူတို့တွေကလာပြီးတော့ အမဲတွေဆန်ရေစပါးတွေ
ကို လုလို့ချင်ရင် ပြန်ပြီးတော့ ခုခံဖို့ လူအင်အားလည်းမရှိဘူး…လက်နက်အင်အားလည်း မရှိဘူး……
အဲဒီတော့တစ်ခုတည်းသော ကျွန်တော်တို့ တဲ့အိမ်စုလေးက လူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ ကျွန်တော်စဉ်းစား
မိတာလေး တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်” လို့ပြောတယ်…..”အဲဒီနည်းလမ်းကတော့ ဟော ဟိုကမြက်ခင်း
ပြင်ကျယ်ကြီး ရှိတဲ့နေရာကို ကျွန်တော်တို့ အရောက်သွားဖို့ပါပဲ”လို့ပြောလိုက်ပါတယ်………
အဲဒီအခါမှာ အကုန်လုံးက ဒန်ကို ကိုဝိုင်းပြီးပြောတာပေါ့…”မင်းပြောမှလား ဒန်ကိုရာ…အဲဒီမြက်ခင်း
ပြင်ကျယ်ကြီဆီကို ငါတို့ရောက်အောင် သွားနိုင်မှတော့ မင်းကို တိုင်ပင်နေပါ့မလား” ဒီမြက်ခင်းပြင်
ကျယ်ကြီးကို ရောက်ဖို့ အတွက်ငါတို့ ရွှံ့နွံအိုင်ကြီးကို ဘယ်လိုဖြတ်ရမှာလဲ….ကြောက်စရာကောင်း
တဲ့ ဒီရွှံ့နွံအိုင်ကြီး အကြောင်းကို မင်းလည်းသိသားနဲ့ကွာ” လို့ပြောကြတယ်………အဲဒီတော့ဒန်ကိုက
“အဲဒါကိုလည်း ကျွန်တော စဉ်းစားထားတာလေးတော့ ရှိပါတယ်” လို့ပြောတယ်…..
“ဟ….လုပ်စမ်းပါအုံး အဲဒါဆို တို့ကရွံ့နွံအိုင်ကြီးကို ဘယ်လိုကျော်မှာလဲ…” လို့ပြန်မေးကြတယ်….
ဒန်ကိုက “ဟောဒီကျွန်တော်တို့ ပရိသတ်ထဲက အားကောင်းမောင်းသန် လူငယ်၅ယောက်လောက်
ထွက်ခဲ့ပါ…” လို့ခေါ်လိုက်တယ်….. လူငယ် ၅ယောက်လည်း မဆိုင်းမတွပဲ ထွက်လာပါတယ်….
လူငယ် ၅ယောက်ကို ဒန်ကိုက ” မင်းတို့ ၅ယောက် လက်ချင်းမြဲမြဲတွဲပြီးတော့ ဟောဒီရွှံ့နွံအိုင်ကြီးထဲ
ကို မင်းတို့ခုန်ဆင်းလိုက်ပါ…” မင်းတို့ ပုခုံးတွေပေါ်ကနေပြီးတော့ တို့အဖိုး တို့အဖွား တို့အဖေအမေ
တို့တဲ့အိမ်စုလေးက လူတွေက ပုခုံးကို တံတားသဖွယ် အသုံးပြုပြီးတော့ ဟော ဟိုကမြက်ခင်းပြင်
ကျယ်ကြီးရှိရာကို တို့သွားကြမယ်…” လို့ပြောလိုက်တယ်……..အဲဒီအခါမှာ လူငယ် ၅ယောက်က
မဆိုင်းမတွ ရွှံ့နွံအိုင်ကြီးထဲကို ခုန်ဆင်းလိုက်ပါတော့တယ်………ဒါပေမယ့်လို့ ကြောက်စရာကောင်း
လှတဲ့ ရွှံ့နွံအိုင်ကြီးရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ဒီလူငယ် ၅ယောက်ကို ဟိုးအောက်ခြေထိ ရွှံ့နွံတွေကဆွဲစုပ်ယူပြီး
အသေသတ်ပစ်လိုက်တာ လူငယ်လေးတွေဟာ အပေါ်ကိုပြန်တက်မလာန်ိုင်တော့ပါဘူး………..
အဲဒီအချိန်မှာ ဒန်ကိုက” ကျွန်တော်တို့ထဲကနေ နောက်ထပ်လူငယ် ၅ယောက်ထွက်လာပါအုံး…”
လို့ ခေါ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူမခေါ်ခင်ကတည်းက လူငယ် ၅ယောက်ဟာ အသင့်ဖြစ်လို့နေပါပြီ..
ဒီလူငယ် ၅ယောက်ကလည်း သူတို့လက်တွေကို မြဲမြဲတွဲပြီးတော့ ရွှံ့နွံအိုင်ကြီးထဲကို ခုန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်
အဲဒီလူငယ် ၅ယောက်ကိုလည်း ရှေးကလူငယ် ၅ယောက်လိုပဲ ရွံ့နွံအိုင်ကြီးကအသေသတ်ပစ်လိုက်တယ်..
အဲဒီအခါမှာ နောက်ထပ် ၅ယောက် ၅ယောက်သော လူငယ်တွေဟာ သတ္တိရှိရှိနဲ့ ထွက်လာပြီး
ဒီရွှံ့နွံအိုင်ကြီးထဲကို ခုန်ဆင်းကြပေမယ့် ဘယ်သူမှ သူတို့ပုခုံးတွေပေါ်ကနေပြီး မြက်ခင်းပြင်ကျယ်ကြီး
ဒီအခါမှာတော့ အားလုံးက ၀ိုင်းပြီးတော့ ဒန်ကို့ကို
လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးကြတာပေါ့………”မင်းကိုယုံလို့ ငါတို့က အကြံတောင်းတာ…
အခုတော့ မင်းအကြံဥာဏ်ကြောင့် ငါတို့သားတွေ ငါတို့မြေးတွေ ငါတို့တူတွေ…သူတို့အသက်တွေ
ဟောဒီ ရွှံနွံအိုင်ကြီးထဲမှာ စတေးကြရပြီ…….အဲဒီအသက်တွေကို မင်းကဘာနဲ့များ ပြန်ပြီးတော့
လျော်မှာလဲ …” လို့ဝိုင်းပြီးပြောကြတာပေါ့………….အဲဒီအခါမှာ ဒန်ကိုက ” အဲဒီလိုဆိုရင်
အားလုံးပဲ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ကြပါဗျာ..” လို့ပြောပြီးတော့ သူ့ခါးမှာ အမြဲတမ်းဆောင်ထားနေကျ
အမဲလိုက် ဓါးမြှောင်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး သူ့လည်ပင်းကနေပြီးတော့ရင်ဘက်အထိ ခွဲချပြီး သူ့ရင်ထဲက
အသည်းနှလုံးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်……..ပြီးတော့ သူ့အသည်းနှလုံးကို တဲအိမ်စုလေးက
လူတွေအားလုံးမြင်အောင် ပြပြီးတော့ ရွှံ့နွံအိုင်ကြီးထဲကို ပစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်………
ရွှံ့နွံအိုင်ကြီးထဲကို ဒန်ကိုရဲ့ အသည်းနှလုံး ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက် အင်မတန်ကြီးမားတဲ့
အသည်းနှလုံးကြီး အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ ရွှံ့နွံအိုင်ကြီးထဲမှာ ပေါလောပေါ်နေတာကို အားလုံး
မြင်တွေ့ကြရတယ်………..အဲဒီအချိန်မှာ ဒန်ကိုက “ကျွန်တော်တို့တဲ့အိမ်စုလေးက လူတွေအကုန်လုံး
ကျွန်တော့ အသည်းနှလုံးပေါ်ကဖြတ်ပြီးတော့ ဟိုဘက်ကမြက်ခင်းပြင်ကြီးရှိရာကို ရောက်အောင်
သွားကြ…သွားကြ…” ဆိုပြီးတော့ အော်တယ်………အဲဒီကျမှ တဲအိမ်စုလေးက လူတွေဟာ
ဒန်ကို့ အသည်းနှလုံးပေါ်က ဖြတ်ပြီးတော့မြက်ခင်းပြင်ကျယ်ကြီးရှိရာကို ရောက်သွားကြတယ်….
အားလုံးတစ်ယောက်မကျန် ကုန်ပြီဆိုတော့မှ ဒန်ကိုဟာ အဲဒီရွှံ့နွံအိုင်ကြီးဘေးမှာ ဗိုင်းခနဲလဲကျပြီး
သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ သူသေဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက် ရွှံ့နွံအိုင်ကြီးထဲမှာ ပေါလောပေါ်နေတဲ့
အသည်းနှလုံးကြီးဟာလည်း ဖျတ်ခနဲကွဲကြေပြီးတော့ လွှင့်စင်သွားလိုက်တာ…..ဘယ်အထိတောင်
လွှင့်စင်သွားသလဲဆိုရင် မိုးကောင်းကင်ထိအောင် လွှင့်စင်သွားပြီးတော့ မိုးကောင်းကင်မှာ တွဲလွဲ
မိုးကောင်းကင်မှာတွဲလဲခိုချိတ်နေတဲ့ ဒန်ကိုရဲ့ အသည်းနှလုံး အပိုင်းအစလေးတွေကို အောက်ကနေပြီး လှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် တလက်လက်နဲ့ တောက်ပနေတာကို အားလုံးပဲမြင်ကြရတယ်။
အဲဒါဟာ ငါ့သမီးတို့ အဖိုးတို့ အခုမြင်ကြရတဲ့
ကြယ်ကလေးတွေပေါ့ သမီးရဲ့ လို့ အဖိုးကသူ့ပုံပြင်ကို အဆုံးသတ်တတ်ပါတယ်………………
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒီနေရာမှာ အဆုံးသတ်သွားပေမယ့် အဖိုးဆက်ပြီးတော့ ပြောတဲ့စကား
လေးတစ်ခွန်းကိုတော့ ယနေ့ချိန်ထိ မှတ်မိနေပါသေးတယ်………………………
“ငါ့သမီးဟာ နောင်တစ်ချိန်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဒန်ကိုလိုပဲ လူအများရဲ့ ကောင်းကျိုးကို
ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး အနစ်နာခံနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစား
ပါ………….ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ခဲ့ပဲ နောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း ဒန်ကိုလို ခေါင်းဆောင်
ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်လိုက်ပဲလုပ်ပါ……..” လို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကို ဒီစာကို
မူရင်းကိုတော့ ဒီလင့်လေးမှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်..
ဖုန်း free ခေါ်ဆိုမယ် →